Walxo duula oo lagu arkay hawada Mareykanka iyo walaac ka dhashay – Calanka.com
Walxo duula oo lagu arkay hawada Mareykanka iyo walaac ka dhashay
Warbixin ay soo saartay dowladda Mareykanka oo ka hadleysay walxo duula oo aan la garan waxa ay yihiin ayaa lagu sheegay inaan la heyn wax caddeymo ah oo xaqiijinaya jiritaanka walxahaas ee hawada Mareykanka.
Balse warbixinta ma aysan beenin suurtogalnimada jiritaanka waxyaabahaas oo kale, sida ay saraakiil dowladda ka tirsan u sheegeen warbaahinta Mareykanka.
Qiimeyn lagu sameeyay 120 dhacdo ayaa la filayaa in lagu shaaciyo in teknolojiyadda Mareykanka aysan ku lug lahayn inta badan arrimahaas.
Balse warbixinta laguma qiimeyn waxa ay yihiin walxahaas lala xiriiriyay dhacdooyinkaas, sida ay saraakiishu sheegeen.
Waxaa lagu wadaa in wakiillada Kongareesku ay bishan dhexdeeda helaan nuqul ka mid ah warbixinta.
Warbixintu waa natiijada howlgal ay sameeyeen milatariga Mareykanka oo sanadkii la soo dhaafay lagu baarayay walxo duula oo aan la garan oo tobnaankii sano ee la soo dhaafay lagu arkayay hawada Mareykanka.
Waaxda Gaashaandhigga Mareykanka, (Pentagon), ayaa sheegtay inay dooneysay inay wax badan ka fahanto walxahan, oo loo soo gaabiyo (Yovuz), si loo go’aansado inay khatar ku yihiin ammaanka qaranka iyo in kale.
Warbixinta ayaa soo jiidatay dadka Ameerikaanka ah.
Maxaa lagu sheegay warbixinta?
Warbaahinta ayaa markii ugu horreysay shaacisay shalay, waxaa ka mid ahaa New York Times iyo Washington Post, kaddibna waxaa ku soo xigtay CNN.
Warbaahintan ayaa sheegay inay la hadleen ilo kala duwan oo dowladda ah oo ay wax ka weydiiyeen natiijada warbixinta.
Saraakiisha ayaa sheegaya in in ka badan 120 dhacdo lagu xusay warbixinta kuwaas oo dhacay 20-kii sano ee la soo dhaafay, kuwaas oo badankood ay soo tebiyeen shaqaalaha ciidamadda badda ee Mareykanka, halka qaar kalena ay soo sheegeen ciidamo ajaanib ah.
Si kastaba, ma jiro wax xaqiijinaya in waxyaabahan duula ee ay arkeen duuliyeyaasha ciidamada badda ee Mareykanka ay ka yimaadeen dhanka spacecraft, sida uu ku warramay York Times.
Warbixinta cusub ayaa soo xigatay saraakiil sirdoon ah oo sheegaya in laga yaabo in waxyaabahan ay ka tarjumayaan tijaabooyinka teknolojiyadeed ee ay soo bandhigaan ciidamada ay cadowga isku yihiin ee Ruushka amaba Shiinaha.
Wargeyska iyo CNN ayaa intaas ku daray in saraakiisha sirdoonka ay ka walaacsna yihiin saameynta ay walxahaas ku yeelan karaan ammaanka qaranka.
Waa maxay walxahan duula ee la arkay?
Warbaahinta CBS ayaa barnaamijkeeda 60 Daqiiqo ku wareysatay duuliyeyaal ciidamada badda ee Maryekanka ka tirsan, kuwaas oo arkay walxo duula oo aan la garaneyn, kuwaas oo u duulayay si ka xawaare dheereysa wax walba oo duula oo ay garanayaan.
Duuliyaha howlgabka noqday ee Ryan Graves ayaa sheegay in shirkadda Jet Squadron, ee uu la shaqeyn jiray, ay bilowday in sanadkii 2014 ay aragtay walxo duula oo maraya aagga la mamnuucay ee Virginia.
Wuxuu intaa sku daray in walxahan aysan sii deyn qiiq la arki karo, iyagoo ku duulaya xawaare sare oo aan lagu qiyaasi karin teknolojiyadda haatan jirta.
Wuxuu sidoo kale sheegay in dhacdo noocaas oo kale ah la arkay xilli uu tababar duuliyenimo ah uu ka socday xeebta Atlaantikada, iyadoo walxahaas la arki jiray inta badan si maalinle ah muddo labo sano ah.”
Labo bilood kahor, Pentagon-ka ayaa shaaciyay saddex muuqaal oo muujinaya waxa lagu sheegay “xaalad cimilo oo aan sharraxaad laga bixin”.
Wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay inay dooneyso inay meesha ka saarto wax walba oo madmadow ah oo ku saabsan xaqiiqda muuqaalladaas oo la soo dusiyay sanaidhii 2007 iyo 2017.